November 20, 2020 - Padaethar
သင့် မွေးရက် ကပြောတဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူအကြောင်း
ချစ်သူ သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေးနဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ မလှတဲ့အဆုံးသတ်
ချစ်သူ သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေးနဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ မလှတဲ့အဆုံးသတ် လက်တလောမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ‘To CatchaCheater’ အစီအစဉ်ဟာ YouTube မှာလည်း အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ မိမိတို့လက်တွဲနေတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကို သစ္စာရှိမရှိ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် ‘To CatchaCheater’ အစီအစဉ်လျှို့ဝှက်ရိုက်ကူးရေးသမားတွေက တောင်းဆိုသူတွေကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးတာပါ။ အခုလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ ချစ်သူ သစ္စာရှိမရှိကို စမ်းသပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ချစ်သူဟာ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပြင်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ‘To CatchaCheater’ မှာ ဖျားယောင်းသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ … Read more
ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိသွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်(၉)ချက် ၁။ သူအနားမှာရှိနေရရင် ဘဝတစ်ခုလုံးပြည့်စုံနေသလို အရမ်းပျော်နေမိတယ်။ ၂။ သူနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ သေချာဂရုစိုက်ပေးနေမိတယ်။ ၃။ သူနဲ့အဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါ အရမ်းစိတ်ပူမယ်၊ သူဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ ဘယ်သူနဲ့ရှိနေလဲပေါ့။ ၄။ သူနဲ့စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်ကြတိုင်း တစ်လောကလုံးက ကိုယ့်ကို ဥပေက္ခာပြုထားသလိုမျိုး ခံစားနေရတတ်တယ်။ ၅။ ကိုယ့်ချစ်သူမှားမှားမှန်မှန် သူ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်ပေးနေတတ်တယ်။ ၆။ အဆင်မပြေတဲ့ အချိန်တိုင်းလဲ ပြန်အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတာ သိပေမဲ့ ပာိုတွေး ဒီတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်ခံစားနေတတ်ကြတယ်။ ၇။ သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ခွန်းအားအဖြစ်ပြောင်းလဲအောင် ကိုယ့်က ဖေးဖကူညီပေးနေမိတယ်။ ၈။ သူများအတွက် သူက ဘာမှမပာုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဘဝမှာ အရေးပါဆုံးသော လူတစ်ယောက်အဖြစ် လက်ခံထားကြတယ်။ ၉။ သူ့အပေါ်မှာ အတတ်နိုင်ဆုံး နားလည်ပေးပြီး သာယာတဲ့အချစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် … Read more
ချစ်သူ မရှိတဲ့ Single မိန်းကလေးတွေက ဒါတွေလုပ်မယ်ဆို ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာရမယ်
ချစ်သူ မရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေက ဒါတွေလုပ်မယ်ဆို ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာရမယ် ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲပြောပြော Single ဘဝလောက် သာယာတာမရှိဘူး။ သွားချင်တဲ့နေရာကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် သွားလို့ရတယ်။ နောက်ဆံတင်းစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်က single ဖြစ်နေလို့လည်း ဘာမှအားငယ်နေဖို့မလိုဘူး။ အခုပြောပြမယ့်အရာတွေကိုသာ လိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆို ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ် ကျေနပ်လွန်းလို့ သံယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့တွေ တွယ်လာမှာတောင်မကြိုက်တော့တဲ့အထိ ပျော်ရပါလိမ့်မယ်။ ၁။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်သူတော်ထား ချစ်သူနဲ့ချိန်းတွေ့သလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်သူလိုသဘောထားလိုက်လေ။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်၊ ညစာကို ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးမှာ အေးအေးဆေးဆေးစား။ အရမ်းကို သာသာယာယာဖြစ်နေမှာ။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပန်းစည်းလေးတွေ့ရင်လည်း ဝယ်လိုက်ပေါ့။ ၂။ လှလှပပနေ ဝတ်ထားရင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ခံစားရမယ့် ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်တွေကို ဝယ်လိုက်။ ဒေါက်ဖိနပ်၊ ဂါဝန်၊ Acessorie တွေ ဝတ်ပြီး အပြင်သွားရတဲ့ခံစားချက်က တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ဝတ်စားပြင်ဆင်ပြီး မှန်ရှေ့မှာရပ်လိုက်တဲ့အခါ … Read more
သင့် နာမည် အင်္ဂလိပ်စာလုံးအစက ဘာနဲ့စလဲ…???သင့်နာမည် အင်္ဂလိပ် အစ စာလုံးက ရည်ညွှန်းတဲ့ သင့်အကြောင်း
နာမည်ကျော် စိတ်ပညာရှင် Sylvia Browne ကတော့ သင့် နာမည် ရဲ့ အစစာလုံး ကရည်ညွှန်းတဲ့ သင့် အကြောင်း ကို ပုံဖေါ်လိုက်ပါပြီ။ သင့် နာမည် ကို အင်္ဂလိပ်ဘယ်စာလုံးနဲ့စပါသလဲ။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ ၂၆ လုံးရှိပေမယ့် မြန်မာ အများစု ပေါင်းတတ်တဲ့ စာလုံးတွေကိုပဲဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ A -နဲ့စတဲ့သူ – လွတ်လပ်မှု ကို အင်မတန်လိုလားပြီး၊ သူအလိုရှိတဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ သတိ၊ စွမ်းအား တွေနဲ့ ပြည်စုံတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဝတစ်လျှောက် ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေရှိတတ်တယ်။ သူ့ပန်းတိုင် ရောက်ဖို့ ကူညီထောက်ပံ့တဲ့ သူတစ်ယောက်တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ B- ပေါ့ပျက်ပျက်နဲ့ စိတ်ခံစားလွယ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ကိုယ်အတွက်ထက်တပါးသူအတွက် ပဲ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လုပ်တတ်တယ်။ အချက်အပြုတ်ကောင်းပြီး ဖော်ရွေတယ်။ နာကျင်ထိခိုက်လွယ်သလောက် … Read more
၀ိညာဉ်များနှင့် ဆက်သွယ်စကားပြောသူ ဒေါ်အေးအေးမြင့်ရဲ့ ဟောကိန်းက မှန်နေပြီလော…
တိုက်ဆိုင်လို့ မခံနိုင်ရင် ဘလော့သွားကြပါ…
တိုကျဆိုငျလို့ မခံနိုငျရငျ ဘလော့သှားကွပါ မယားရှိ ယောကျကငြ်ျားတှေ၊ လငျရှိတဲ့ မယားတှအေသခြော ဖတျကွညျ့သှားကွပါ …။ လငျရှိတဲ့ မယားတှမေယားရှိတဲ့ ဖှနျရူးတှေ သခြောဖတျပါ။ ဒူးနဲ့မကျြရညျသုတျရတဲ့ ဘဝမရောကျခငျ ပွငျသငျ့တာကိုပွငျပါ …။ သက်ခာ အကွောကျတရား မရှိရငျဆကျလုပျခငျြရာလုပျကွပါ။ သူတျောစဉျယောငျယောငျ လူကွီးလူကောငျးယောငျယောငျနဲ့ ကွောငျသူတျော ကွှကျသခိုးမလုပျကွပါနဲ့ …။ Online သုံးပွီး အရှံဆုံးက လငျရှာမယားရှာ လငျရူးဖှနျရူး တှပေဲ။ အိမျကညီမ အမနဲ့ဇနီမယားကို လူမြားတှကွေညျ့မှာကို ကွောကျတဲ့လူ သဝနျတိုတတျတဲ့လူ သူမြားသားမယားကိုကွတော့ ဘာလို့အခြောငျနှိကျခငျြနကွေတာလဲ …? တိုကျဆိုငျလို့ စိတျဆိုးရငျ တဈခါတညျး Block သှားပါ အမှနျတရားက အမှနျတရားပါပဲ …။ “အိမျထောငျရှငျနှငျ့ On Line ” အန်တရာယျ ခတျေ ကာလ ပွောငျးလာသညျနှငျ့အမြှ(ပွဈမူ့)ကြူးလှနျမှု့မြားသညျ … Read more